Yan Aung: နယူးယောက်မြိ့ု့ကုလရုံးရှေ့မှ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံက ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ်တွေပါ။ စစ်အစိုးရရဲ့ မတရားဖိနှိပ်မှုကို ခံနေကြရတဲ့သူတွေခြင်း အတူတူပါပဲ။ ဒီသပိတ်မှောက်တဲ့ ကိစ္စကို ရဟန်းသံဃာတော်တွေက စတင်ဦးဆောင်ပြီး ပြည်သူတွေအတွက် ရှေ့ ကမားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ကျွန်မတို့အရမ်းလေးစားကြည်ညိုမိပါတယ်။ အကို့ ရဲ့ သုံးသပ်ချက် နံပါတ် (၄)မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်တဲ့ ကရင်၊ ချင်း တပ်လို့ ရေးထားတဲ့ ကိစ္စကို အနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်တွေဟာ လူနည်းစုဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်စိတ် အတိုင်းအတာ က တော့အတူတူပါပဲ။ ကိုရန်အောင်ဆိုလိုချင်တာက စကားမပေါက်ရောက်စေချင်တဲ့အတွက် နအဖက ဗမာစကားမတတ်တဲ့ ကရင်၊ချင်း စတဲ့တပ်တွေကို စေခိုင်းတယ်လို့ ပြောချင်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ကတော့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အထင်မှားမှုတွေရှိလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ ဘာသာတရားနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ စဉ်းစားဥာဏ်မရှိတဲ့ သူတွေသာ ရဟန်းသော သံဃာသော နားမလည်ဘဲ စေခိုင်းရာကိုသာ လုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုဒီသုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်မ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဒီသုံးသပ်ချက်ကို ဖတ်ကြတဲ့သူတွေမှာ ပညာအရည်အချင်း အဆင့်အတန်းက အမျိုးမျိုးရှိကြပြီး အဓိပ္ပါယ်ကောက်ယူမှုအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနားလည်မှု အမျိုးမျိုး၊ အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ကြားကနေ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ပဋိပက္ခတွေဆီကို ဦးမတည်စေသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ စာအရေးအသားကို အနည်းငယ် သတိထားပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ။
ဟုတ်ကဲ့. ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ. ခုလိုမျိုးထောက်ပြပြောဆိုတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.